IPhone cusub 12 midab guduudan oo horay loo sii iibiyay Jimcaha | Waxaan ka socdaa mac
Munaasabada maanta, waxaan ku arkeynaa midab badan iyo farxad. Caadiga ah ee guga. Apple-na waxay nagala yaabtaa xayeysiin farxad iyo midabba leh. Cusub iPhone 12 guduud iibinta kahor Jimcaha. Xaqiiqdii bayaan dhab ah oo ujeeddo leh qaabkan cusub.
Apple ayaa layaab ku noqotay dhacdadan guga cusub. Intii Tim Cook uu dhex mushaaxayay Apple Park maalin guga oo midabo badan leh, midabka casaanka ah ee cusub ee iPhone 12 ayaa la soo saaray. ayaa ku biiri doona Mini iyo iPhone 12 safka jimcaha, iyada oo rarka amarrada ugu horreeya Abriil 30.
Midabkan cusub waxay xoojineysaa geesaha aluminium ee fidsan ee iPhone 12, kuwaas oo si fiican ugu habboon midabka muraayadda gadaal si sax ah milled.
Labada noocba, iPhone 12 iyo iPhone 12 mini waxay leeyihiin kuwa ugu fiican teknolojiyadda Apple ee hadda ka mid ah kuwa ugu dhiiranaanta iyo isla mar ahaantaana midabada ugu quruxda badan ee aan ku arkay, ugu yaraan, taleefan. Waxaan ku heli doonnaa tiknoolajiyadda ugu fiican midabada ugu fiican.
Sidoo kale leh waasac Super Retina XDR bandhigyo gees ilaa gees oo leh OLED aragti dhalaal, muuqaal dheeri ah, iyo daboolka hore ee Ceramic Shield, oo bixinaya boodboodkii ugu weynaa ee adkaysi weligiis ah ee iPhone, waxaan haysannaa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican Apple.
IPhone 12 iyo iPhone 12 mini oo guduudan ayaa loo heli doonaa sii qabsashada laga bilaabo Jimcaha, Abriil 23, la heli karo laga bilaabo Jimcaha, Abriil 30. Macaamiilku sidoo kale waxay ku buuxin karaan iPhone-keeda kiis maqaar cusub oo MagSafe ah oo isku midab ah laakiin in yar ka madow.
Waxaa jiri doona midabada cusub ee qalabka taas waa la iibsan karaa wixii hada ka dambeeya. Capri buluug, pistachio, qaraha ama amethyst… Isla marka uu Dukaanka Apple mar kale furmo, waxaad fursad u heli doontaa inaad ku aragto iyagoo nool.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Midab casaan ah iPhone 12 oo horay loo sii iibiyay Jimcaha
Apple waxay ku dhawaaqeysaa Podcasts iyada oo loo marayo Adeegga Diiwaangelinta